१६ साउन काठमाडौँ । सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली विधानसम्मत नभएको भन्दै लिखित ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका नेतालाई देउवा समूहले हप्कीदप्की गरेर पठाएको छ । माग बोकेर गएका रामचन्द्र्र पौडेल पक्षका नेतालाई देउवा समूहले भन्यो, ‘तपाईहरु विरोध गर्दै जानुस् । हामी अब रोकिँदैनौँ ।’
१४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेपछि प्रभाव पार्ने हिसाबले विभाग गठन गरेको, क्रियासिल सदस्यमा मनोमानी गरेको, समायोजनमा आफुखुसी गरेको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न पौडेल पक्षले देउवालाई भेटेरै पाँचबुँदे ज्ञापन पत्र बुझएको थियो । तर, पौडेल पक्षको मागमा देउवा ‘टसको मस’ भएनन् ।
नेता पौडेलले १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा रहँदै गर्दा सभापतिबाट भएका केही कदमले महाधिवेशनको निष्पक्षतामा साथमा महामन्त्री डा. शशांक कैराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, जीवन परियार र सरिता प्रसाई सभापतिको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।
सभापति देउवाका तर्फबाट देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एनपी सावत सहभागी थिए ।
‘सभापतिजी हामी महाधिवेशनको सघांरमा छौँ । महाधिवेशनलाई स्वातन्त्र, निष्पक्ष, धाधँलीरहित बनाउन हामी हरसहयोग गर्छौँ । तर, महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु अघि भएका विभिन्न घट्नाक्रममा हाम्रा केही फरक मत छन्’ भन्दै पौडेलले लिखित ध्यानाकर्षण लिएर आएको बताएका थिए ।
लगतै पौडेलले लिखित पत्र केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारलाई वाचन गर्न लगाए । सभापतिलाई बुझाइएको पत्रमा नेता पौडेल र महामन्त्री शशांकको हस्ताक्षर छ ।शुक्रबारको नयाँपत्रिका दैनिकबाट